नक्कली र सक्कली मह कसरी छुट्याउने ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १६ कार्तिक २०७६, शनिबार १९:३४
मह मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक खाने कुरा हो । यसको माग पनि बजारमा यही कारणले धेरै हुने गर्छ । यही आवश्यकताका कारण अर्गानिक मह भन्दै बजारमा नक्कली महको बिगबिगी पनि धेरै छ । महको शुद्धताबारे जानकारी नभएकाहरु बजारमा विभिन्न बाहामा ठगिने गरेका हुन्छन् । चिनी पानीमा मौरीको चाका भिजाएर ‘शुद्ध मह’ भन्दै बेच्ने गरिन्छ । आफ्नै अगाडि चाकाबाट निकालेको मह भएकोले त्यसलाई धेरैले विश्वास गर्ने गर्छन् । त्यसैले अर्गानिक र शुद्ध महको कस्तो हुन्छ ? भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको शुद्धता परीक्षणको लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
ऐश्वर्या राय आफ्नो ४६ औं जन्मदिन मनाउँदै